Iyo Alpha Empath: Iko Kusimba Uye Kunzwisisa Kunopindirana - Blog
Iyo Alpha Empath: Iko Kusimba Uye Kunzwisisa Kunopindirana
Mufananidzo wepfungwa vanhu vazhinji vanouya nawo pavanokurukura empaths hazvireve hazvo kuti ubate kumeso.
Empaths inowanzo fungidzirwa kuve yakapfava, pamwe ne melodramatic, hypersensitive, kushushikana, uye codependent .
maitiro ekuziva kana iwe wakanaka
Chikamu chezvaitarisirwa kare zvakapoterera mweya iyi yakaoma nekuti vanhu vazhinji vane tsitsi unokwanisa , zvazviri, hunhu hunosanganisira hunhu ihwohwo.
Kune avhareji empath, hupenyu hwezuva nezuva hunogona kukurira. Kunze kwekuvharirwa nepfungwa dzevamwe vanhu uye nemanzwiro anouya achibva kumativi ese, kune zvekare kupesana kwehumwe kuwanda kwekunzwa.
Mazhinji, kana asiri maratidziro auchasangana nawo anoteedzera kune zvinhu zvakaita sechiedza, kurira, uye hwema, pakati zvimwe zvinhu .
Saka nekudaro, izvo zvinofungidzirwa nemumwe munhu kuve melodrama kana codependency zvinogona kunyanyisa kukundwa kubva kune avo vese pfungwa pahyperdrive, uye vachida kuvimba nevavanoshamwaridzana navo / shamwari kuti vavachengete pavanenge vakaoma mutezo kubva pakuwedzeredzwa-kuratidzwa.
Izvi hazvireve kuti empaths haina kusimba. Kwete mune zvidiki.
Muchokwadi, empaths zhinji dzinoratidzawo izvo zvakajairika zvinoonekwa sehunhu hwaAlfa, kunyangwe muzviitiko zvakasiyana pane zvinowanzo kuve zvine hukama nemhando dzeAlfa.
Vanogona Kuva Vanyoro Uye Vakasimba
Unoziva here kuti vangani empaths inopinda mumabasa umo mavanoshandira kunhengo dzinotambura kwazvo dzenzanga? ZVAKAWANDA.
Kana iwe ukagara pasi ndokutaura neboka rakasarudzika revanamukoti, vashandi vekuchengetedza varwere, uye vanogadzirisa mhuka, unowana nhamba inotyisa yavo vanhu vane moyo munyoro, vanonzwira tsitsi.
Vakakweverwa kumabasa avo akasarudzwa nekuti ivo vanokanganiswa nekutambura kwevamwe vanhu zvekuti vaida kuita chimwe chinhu, chero chinhu, kubatsira.
Apa ndipo panowoneka simba.
Chokwadi, mamwe eaya marudzi ekuporesa anogona kuita kunge akanyarara uye akapfava, asi funga kwekanguva kuti munhu anofanira kunge akasimba zvakadii kushanda nevanhu nemhuka dzine chirwere chisingaperi kana chisingaperi.
Havangodi ivo chete kuti vave nesimba rakakwana remweya kuti vakwanise kuratidza, zuva nezuva, uye kubatsira vamwe vanogona kunge vari kutambura zvakanyanya nezvose kushungurudzika mupfungwa uye mumuviri , asi vanodawo kuzvivimba uye kuzvishingisa.
Mukuru ane dementia anogona kupopotera mukoti kuti angashinga kumupa mishonga yaanoda.
chii chinonzi chip uye joanna chinowana mambure akakosha
Mwana akatarisana neimwezve nzira yekurapa gomarara revana anoda timu yevanamukoti iyo ichave inokurudzira nekunzwira tsitsi.
Mhuka yakakuvara isingazive zvirikuitika uye inoda kudzorwa kuti ipore ichachema zvine tsitsi.
Fungidzira iwo mazinga esimba nehushingi izvo zvinodikanwa zuva nezuva kuita iri basa.
Ivo Vanogona Kuva Vatungamiriri Vezvisikwa
Anonzi Alpha empath inogona kubudirira kwazvo muchinzvimbo chehutungamiriri nekuti iye kana iye anokwanisa kutaurirana nerubatsiro rwekuziva kwekunzwira tsitsi.
Paunogona kuona zviri kunzwika nevanhu vari mubhodhi rako musangano, unogona 'kushanda' mukamuri zvinoenderana: kuita kuti vanonatsa vave nechido, kudzikamisa vane hasha, uye kukurudzira vanozeza.
Alpha empaths inotungamira munzira yemunhu, yakabatana: ndeyechokwadi, inotsamira pakushandira pamwe, kushandira pamwe, uye kuona kuti avo vavanoshanda navo vanonzwa kugamuchirwa uye kukosheswa.
Ivo vanova moyo wechokwadi wesangano: iyo yepakati hub panotungamirwa, kutumwa, kurumbidzwa, uye kurudziro inogona kuyerera.
Ivo vanoita kubatana kwakanakisa nevanoshanda pamwe nevashambadziri, uye vanogona zvakare kuudza kana timu ichida pizza uye husiku husiku.
Anonzwira tsitsi shefu anogona kutenderedza mukati apo mumwe wevashandi vavo ari panguva yakaoma, kunyangwe kana vanga vakapfeka 'Ini NDAKANAKA' chifukidzo vachiri kuoffice.
Vari kunzwisisa, vane tsitsi , uye inogona kushanda nevanhu kugadzirisa mhinduro dzinoshandira vese vanobatanidzwa, panzvimbo pekusagadzikana uye nekuda.
Rima Rutivi rweEmpaths
Iyo yekutsvedza Tsvedza Kusakendenga: Yambiro Kune Ese Maitiro
Kana MaEmpath maviri Akawira Murudo
9 Hunhu hweAchokwadi Alfa Mukadzi
8 Zvinhu Zvinhu Vakadzi Vanounza Kune Ukama
Ivo Havana Kushivirira Kwekushungurudzwa
Chimwe chikuru chakakanganisa kuve empath ndechekuti, sezvo ivo vachipa zvakanyanya, vane mutsa vanodanana, vazhinji vavanoshanda navo (kunyanya narcissists) vanohwandira mu empaths nekuti ivo vanoda kuvachengeta semhuka dzinovaraidza.
Empaths vakanyanya kunaka vavanoshamwaridzana navo, sezvo vanhu vakaomarara ava vanoregerera ROTI yekuita zvisina kunaka / maitiro asina kunaka nekuti ivo vanogona kuona kurwadziwa uye mavambo ezviito izvi zvinokuvadza.
Kugona kuzvidzivirira kubva kuzvikara zvinoda simba rakawanda, kuzvisimbisa, uye kugona kushivirira zvachose zero bullsh * t, kunyangwe kana vakanzwisisa kwairi kutanga.
Iyo Alpha empath inogona kunzwira tsitsi kutambura kwemunhu, asi zvakare chengetedza izvo ' Ndinokuda zvisingaite 'Hazvireve kuti' Ini ndicharegerera kubatwa zvisina kunaka uye hutsinye hwako kwandiri nekusingaperi. '
Iko hakuna zvakare kushivirira kwehunhu husina hunhu kwavari kwavari kubasa, angave ari maneja anovabata zvisina tsarukano kana mumwe waunoshanda naye asiri kuzvidhonza huremu hwavo nekurasa basa rekuwedzera pavari.
Vachasimukira kune chero munhu anovabata zvisina kunaka, uye kunyange vachizozviita nechiyero chekunzwisisa netsitsi, havangadzokere shure pakudzivirira misimboti yavo.
kuhwina murume wako kudzoka kubva kune mumwe mukadzi
Izvo Hazvigoneke Kuti Zvishandiswe
Kuvaka pamusoro penzvimbo yapfuura… dzimwe nzwira dzinopedzisira dzave kushandiswa nekuitirwa zvakaipa, kunyanya narcissistic uye mamwe marudzi anozvishandira nekuti iwo majekiseni anoziva kuti empaths anovenga kufunga kwekukonzeresa vamwe vanhu kurwadziwa kana kutambura.
Rwendo rwune mhosva apa, vamwe kubatidza gasi ipapo, kana kunyangwe yakazara-pane yekurwiswa kwepfungwa yaireva kupfeka iyo inonzwisisika inowanzoitira zvishamiso kuti munyengeri awane zvavanoda.
Izvi hazvibhururuka neAlfa empath.
Vanongosimudza tsiye uye vayeuchidze munhu kuti ivo vanoziva pane musuwo, uye vanogamuchirwa kufamba vachidzoka nawo.
Kuva anonzwira tsitsi, uyu Arifa anozokwanisawo kuona kuburikidza nekuedza kwakanyanyisa kwekubiridzira kwekuhwanda, nekuti iye anokwanisa kuziva kunobva munhu wacho.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kunzvenga uye kuumbazve, uye kutodzosera kuyedza kweanodzvanya pavari (kazhinji kunonyadzisa kwavo).
Ivo Vane Zvinoshamisa Kuzadzisa Hukama
Kana tichifunga nezveAlphas, vanhu vazhinji vanofunga kuti vanozvitutumadza uye vanoda, asi handizvo zvazviri.
Munhu anonzwira tsitsi uye akasika kutonga anogona kuve mamwe emhando dzakanakisa kuve nehukama naye.
Vachave vachiziva zvavo zvavanoda uye zvavanoda, asi havazoisa izvo pamberi pevamwe vese.
rudo rusingadiwi runogara kwenguva yakareba sei
Uye kunyangwe vangave vaine mazano chaiwo pamusoro pekuti vanoda kuti imba imhanye sei, vanodawo kuona kuti vamwe vese vanonzwikwa, vanobvumidzwa, uye vane chirevo chakanaka mumamiriro ezvinhu epamba.
Kana mumwe wako ari empath uye Alfa, mikana yakanaka kuti munhu uyu agone kuona uye kutarisira zvaunoda usati waona kuti unazvo.
Vachatora danho rekutora iwe kuti uwane zvaunoda, uye vova nechokwadi chekuti zvavanoda zvavo zvasangana zvakare.
Iko hakuna nzvimbo yekutsamwa kana hasha nemunhu uyu: aya haasi maitiro avo.
Kana paine dambudziko rinoda kugadziriswa, vanobva vasimuka votora matanho ekugadzirisa, uku vachiona zvakare kuti vari kusvika kwauri nenzira inonzwisisa, inonzwira tsitsi uye inotsigira.
Ivo havasi kuzobuda kuti vakonzere chero kukuvara, asi zviri kutivavarira kushanda ne iwe kuzadzisa mhedzisiro yakanaka kune vese vanobatanidzwa.
Iwe unozviona uri wega empath uye iyo Alfa hunhu mhando? Kana zvirizvo, unotaurirana sei nezvekubatanidzwa? Tinoda kunzwa kubva kwauri mune zvakataurwa pazasi!
kutora zororo muhukama kana muchigara mese
mwaka unotevera wekusanyara unobuda riinhi
kutiza kubva kune murume anonyunyuta